I-FAQs-I-PEIXIN Iqela lamanye amazwe
1. Loluphi uhlobo lwenkonzo kunye nokhathalelo lwabathengi olunikwa liqela leqela lePRIXIN xa kuziwa kuqeqesho?
● Ungathumela itekhnoloji kumzi-mveliso wethu ukuba ubaqeqeshe indlela yokusebenzisa umatshini ngaphambi kokuziswa kwendawo yakho yokuvelisa. Unikwa indawo yokuhlala epheleleyo yinkampani yethu
● Xa umatshini wokucheba umntwana ufika kwindawo yakho yokusebenzela, sithumela ubuchwephesha kwiworkshop yakho ukufaka kunye nokuvavanya umatshini kwaye uqeqeshe abasebenzi bakho
● Ukuba ufuna enye ingcali ukuze ikusebenzele ixesha elide yexesha, singakunceda ekuqeshiseni abasebenzi abanamava
2. Uphando lwezixhobo eziluhlaza alugqibi okwangoku. Ukuba kunokwenzeka, ngaba ungasinceda ekukhetheni umthengisi wezinto ekumgangatho ophezulu?
● Ewe, singakuxhasa ekufumaneni abathengisi bezinto zokwenziwa ezikumgangatho ophezulu kwimakethi yethu yengingqi
● Singahamba nawe ukuya kundwendwela iifektri zabo ukuze bahlole umgangatho wabo
● Singanxibelelana nawe nabathengisi abavela ngaphandle kwemarike yendawo.
3. Ndifuna ukumilisela imveliso yedayari yabantwana, kwaye ungandinika iingcebiso?
● Ewe singakunceda uhlalutye iindleko zexabiso lokuchetywa komntwana kwimakethi yakho yengingqi
● Siya kukunika ingxelo yeendleko ngokweenkcukacha zakho, sibulela ngazo apho ungabalula khona ukubala iimetnamenti zenzuzo.
4. Yeyiphi imiba endifanele ndiqwalasele ngaphambi kokuseka umzi-mveliso wedayari yabantwana?
Kuya kufuneka wazi iimpendulo kule mibuzo ilandelayo:
Zingaphi iziqwenga zeedayari ekufuneka uzivelise ngenyanga ukuzalisa isicwangciso sakho sokuthengisa kunye neenjongo zeshishini?
● Zingaphi iishashi ngosuku ofuna ukuzenza?
● Ungakanani umthamo ofakiweyo oya kukhululeka ukuba usebenze?
● Zeziphi izinto ezifunekayo kwidayari ofuna ukuyivelisa?
5. Ngaba ungawunikeza umatshini wakho ofakwe kwimowudi esebenzayo?
Wamkelekile ukuba undityelele umzi-mveliso wethu. Siza kukubonisa indlela oomatshini abaqhuba ngayo kwisiza kwaye singakubonisa ukuba umatshini wethu uqhuba njani komnye umzi-mveliso wabathengi basekhaya ukuba unomdla
6. Kutheni ndifanele ndikhethe umatshini wakho?
● Sineminyaka engama-30 yamava sokwenza oomatshini
yococeko ● Sikwazile ukufikelela kwinkqubela
● Uyakwazi ukuthelekisa parameter yobugcisa oomatshini bethu xa ithelekiswa izixhobo nabanye abanikezi '- uya kufumanisa ukuba ezobugcisa zihambela phambili kunye nexabiso oomatshini bethu ibenomtsalane kakhulu
● iindawo Yiba nenceba ukuba koomatshini zethu impahla usebenzisa CNC / kwamanani ngekhompyutha ulawulo / ngokuchaneka okuphezulu, yenza oomatshini bakhonze ixesha elide kwaye bazinza ngakumbi phantsi kwesantya esiphezulu
Lady Pad Machine , Mini Pad Production Line , Wet esisula Machine , panty wesampula Production Line , Daily Ucoceko Machine , uTsalo Up Machine ,